NextMping | About: Philanthropy
PaNextMapping ™ tinotarisa kune ramangwana - ramangwana rekupedzisira ndere vana vedu. Isu tinotenda nemoyo wese kuti kupa vana hunyanzvi 'hwehutungamiriri' hakuzovabatsire chete kufamba mumatambudziko izvozvi asiwo kuita ramangwana rebasa rekushandira nzvimbo iri nani uye pakupedzisira nyika.
Isu takagadzira Vana Vanogona Kutungamira seimwe yedzedu nzira dzekudzorera - tinoita zvirongwa zvegore zvevana uye isu tiri kushanda pachirongwa chekuda kugadzira webhusaiti webhusaiti kubatsira vana kudzidza hunyanzvi hwehutungamiriri.
Chiono chedu: Gadzira ramangwana riri nani nekugadzirira vatungamiriri vedu venguva yemberi ... vana!
Mufaro mukuru kwatiri ndewekukanganisa kwevana pasirese uye Tichange tichipa nerupo kune akati wandei masangano anobatsira vana. ”
Reg & Cheryl Cran, Vakatanga
Izvo zvinoshanda: Iyo 4 C's yeVana Vanogona Kutungamira
Tiri kugadzira vana Vanogona Kutungamira portal uko vana nevabereki vavo kana vadzidzisi vachakwanisa kuwana hunyanzvi hwehutungamiriri kuvana. Tiri kubatana nemapoka evana vane mafungiro akafanana kubatsira vana kuti vave vatungamiriri vedu venguva yemberi vakagadzirira.
Kuzvivimba kwakavakirwa pakuzvishingisa kune hutano, isu tinobatsira vana kuvaka kwavo kuvimba ivo pachavo chinovabatsira kuita sarudzo dzakanaka uye nekudyara dambudziko kugadzirisa.
Isu tinodzidzisa kuti kuve neushingi hwakafanana neye 'simba guru' kuve nekugona kutaura wega, kugara pachokwadi kwavari uye nekumiririra icho chakarurama.
Isu tinobatsira vana kudzidza kukosha kwemitauro yemuviri, chinangwa uye mazwi uye maitiro avanoita maitiro avanonzwa nezvavo pamwe chete nemazwi avanosarudza kukanganisa vamwe.
Isu tinobatsira vana kuona kuti chimiro chekuvaka chinhu chakakosha pakuve mutungamiri. Hunhu hwekuvaka hunosanganisira kuita izvo zvakanaka kana pasina munhu ari kutarisa uye kusarudza kufunga ne 'ini kune isu' mindset.
Wakafemerwa here kuti uve chikamu cheichi chinoshamisa chirongwa?
Bata isu kuti uone kuti!